Ukufundwa oku-6 kwabantwana nabantu abancinci kuyahluka ebusika ekwindla | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Ngale nto ingqele yasekwindla Ukuphuma kunye nexesha esitratweni liphelile. Abancinci kufuneka bahlale ekhaya ukudlala okanye ukufunda. Zezi 6 ukufundwa kwabantwana nolutsha yemeko yangoku ebonakalayo kumahluko wawo. Iicomics zakudala ezinje Ingulube yasendle nguVictor Mora oxutywe ne-I-rdillas, imithi, amagqwirha aphezulu ophando kunye nekati engenazi nto, ukudala igama elibonakalayo njengaleyo UJudith Kerr.
1 Imithi - uPiotr Socha
2 I-Kika Super Witch Detective -Knister
3 El Jabato - UVictor Mora
4 Izinto ezingama-50 ongazaziyo ngezilwanyana- uTricia Martineau Wagner noCarles Ballesteros (illustrator)
5 Oonomatse ababini nePinapile - URachel Bright noJim Field (illustrator)
6 UMog weKati engenakuKhanya-uJudith Kerr
Imithi -UPiotr Socha
Ngemifanekiso emangalisayo ngu Wojciech Grajokowski le ncwadi yenzelwe abafundi kwaye banomdla wokwazi nawuphi na ubudala. De Ifomathi enkulu, Sifumanise konke malunga nemithi, ukusuka kwimbali yayo, iimilo kunye nobukhulu bayo, iziqhamo zayo, abemi bayo, iimbekiselo zoncwadi kwanobudlelwane bayo neentsomi.
Ichaphazela nokusibonisa eyakho ukubaluleka kwimbali yomhlaba wethu, ubudlelwane bayo nezilwanyana kunye neentyatyambo ezijikelezileyo. Siyazi ukuba yintoni imithi zide, zibanzi, okanye zihlala ixesha elide. Kwaye ibiyintoni iminikelo yeentlobo ezahlukeneyo zemithi emntwini kuyo yonke imbali yayo, njengokubonelela ngendawo yokuhlala okanye ukukhonza ukwakha izixhobo okanye iindlela zothutho. Iyacetyiswa ngaphandle kwamathandabuzo.
UKika Super Witch Detector - Ibhanti
Iziganeko zale ntombazana zi-tiguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-50. U-Kika unjengawo nawuphi na ubudala bakhe, kodwa unemfihlo egcinwe kakuhle: phantsi kwebhedi yakhe kukho incwadi yeefomyula, oomabophe kunye nemisitho abamnceda kwiihambo zakhe zobugqwirha.
Kulesi sihloko uKika uthenge i ibrifkheyisi yokuba ngumcuphi kwaye uthatha isigqibo sokusebenzisa umntakwabo uDani ukuziqhelanisa. Yiyo loo nto, ezama ukuqashisela ukuba bazakutya ntoni, kodwa kungekudala kuvela imfihlelo ebaluleke ngakumbi: ukunyamalala kwebhayisikile kamama wakhe. Kwaye baya kuyenza nesela lebhayisekile elidumileyo esixekweni.
Ngoburharha obuninzi kwaye kulula ukufunda, kule ncwadi sifuna ukuxabisa umgudu, ukuzimisela kunye novuyo lokwenza izinto kakuhle. Inkqubo ye- imizekeliso nguBirgit Rieger.
Ingulube yasendle -Victor Mora
Ngemifanekiso ye UFrancisco Darnís. Abathandi be I-comic ukusuka kwi-50s kunye ne-60s emva kwexeshaSiyavuyisana nohlelo loku ivolumu yokuqala edibanisa amanani amane okuqala Iintlanga zeli gorha ke ezethu kwaye zikhethekileyo.
Ekunye nabahlobo bakhe omkhulu Taurus, intanda yakhe inkosikazi ehloniphekileyo yaseRoma Claudia okanye kamva, I-Mileto noodle, njengendawo yokuhlekisa kwaba bathathu, ukuxhaphaza, ukuhamba kunye nokuzabalaza kwakhe ngokuchasene neentshaba ezingafaniyo kunye nabahlali ababiyo bayaqhubeka nokutsala abafundi bayo yonke iminyaka.
Izinto ezingama-50 ongazaziyo ngezilwanyana -Tricia Martineau Wagner kunye noCarles Ballesteros (umzobi)
Kwifomathi ye- Ibhodi, kule ncwadi abafundi abancinci bafunda nge Iinkcukacha ezininzi kunye nomnqweno malunga nezilwanyana zazo zonke iintlobo. Umzekelo, la mafudo amaTshayina achama ngemilomo yawo, ukuba intambo yehayire iyakwazi ukulinganisa nasiphi na isandi, ukuba umntwana wendlovu usebenzisa umboko wayo njengesixhobo sokuthomalalisa okanye iindlulamthi zicoca iindlebe zazo ngolwimi lwazo. Kukwacetyiswa ngayo kubafundi abancinci kwaye abancinci kangako.
Oonomatse ababini kunye nenaninasi -URachel Bright noJim Field (umzobi)
Kubantwana be I-3 ukuya kwi-6 iminyaka, ibasondeza kwi izicatshulwa ezinemvano-siphelo.
Ngubani ongaziyo iScrat? I-squirrel yokuqala eyaziwayo evela kuthotho lwefilimu Imiyaka yomkence soloko uleqa i-acorn enqabileyo nokuba imeko ithini okanye iingozi. Ewe, eli bali linokuba ngumrhumo okanye uhlobo olutsha.
Sinayo oonomatse ababini, uCyril noBruce. Kwaye ngeli xesha isizathu sokungavisisani yipinapple. Cyril Uyaqonda ngenye imini ukuba ekwindla ufikile kwaye yena ayigcinanga kutya ukujongana nobusika. Emva koko fumana ipayina yexesha, kodwa ayinguye yedwa. UBruce, ukucinga phambili ngakumbi, ukwenzile.
Ukususela kuloo mzuzu kuqala umdyarho ohamba ngokukhawuleza wempango enqwenelekayo. Kodwa ugqatso luzele imiqobo eya kubanyanzela ukuba kufuneka bancedane. Ke, uBruce noCyril baya kufunda ngokwenyani eyona nto ibaluleke kakhulu kukwabelana ixesha elimnandi nomhlobo.
UMog, ikati engaziwayo -UJudith Kerr
Kwabo kuthi njengabantwana bafunde Xa uHitler weba umvundla opinki, Igama likaJudith Kerr lalisele linxulunyaniswa nalo ibali elingalibalekiyo. Umbhali wase-Jamani wabaleka nosapho lwakhe baya e-United Kingdom, ilizwe elibamkela kwaye lagqibela ngokumnika Umyalelo woBukhosi baseBritane Ngegalelo lakhe kuncwadi lwesiNgesi kuyo yonke le nkulungwane yama-XNUMX. UKerr isasebenza kwiminyaka engama-95 ubudala kwaye ime ngendlela yayo eyaziwayo protagonists eyiyo kunye noseto olusongelwe ngemibala efudumeleyo. Phakathi kwazo kuqhelekile ukuba isilwanyana esithile sivele.
Ikati lakhe UMog ngomnye wabo kwaye ungomnye wabalinganiswa bakhe abadumileyo. Sisilwanyana sasekhaya sikaThomas kwaye iphawuleka ngokungazi nto. Ke, abanini babo bahlala bejikeleza ngesikhalazo esifanayo (Enjani yona ikati!) Ukuphindaphinda ngaphandle kokuyeka phambi kobubi kunye nokuphazamiseka kweMog ehluphekileyo. Kodwa ngobunye ubusuku, ndagula kukuziva ndithotyiwe UMog uya kuba nakho ukuzithethelela ngaphambi kwenyani ephazamisayo. Luya kuthini usapho lwakho emva koko?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » IiComics » 6 ukufundwa kwabantwana nolutsha ngokufundwa kwekwindla